Human Fall Flat, tonga ao amin'ny Mac App Store miaraka amin'ny fihenam-bidy | Avy amin'ny mac aho
Ary amin'ny zoma izao isika ary tonga ny fotoana hilalaovana ho an'ireo mpampiasa Mac. Amin'ity indray mitoraka ity ny lohateny izay ampidirina amin'ny magazay fampiharana Mac dia Midina ny olona, lalao efa ela no nanjary tamin'ny sehatra hafa ary ankehitriny dia natolotra ireo mpampiasa Apple izay te-hividy azy ao amin'ny fivarotana app apple.
Lalao mampiala voly sy malaza izay efa azo elaela ihany koa ho an'ireo mpampiasa manana kaonty Steam. Amin'ity tranga ity dia hiditra amin'ny kiraron'i Bob isika, humanoid somary saro-kenatra izay tsy maintsy mandresy sakana amin'ny andavanandrom-piainany.
Izany no tranofiara lalao raha ho an'ireo mpampiasa PS4, saingy izy io dia ho toy ny referansa ho an'ireo izay tsy mahalala ity lohateny ity:
Miaraka amin'ny sary madio, ity lalao malaza atolotray antsika ity dia fotoana azo antoka amin'ny fitsapana mahafinaritra sy isan-karazany amin'ny fizika tena mandroso. Ho fanampin'izay, ny ivon-tenan'i Bob dia zavatra liana hampiasaina ary ny fianjeran'ireo toetrantsika sy ireo lozam-pifamoivoizana isan-karazany no filaharana. Mety tsy mampino tokoa ireto tontolo ireto, saingy araka ny efa nolazainay teo aloha tena misy ny lalànan'ny fizika ary izany dia manome ny Human Fall Flat izay toerana ilaina amin'ny fahafinaretana.
Hankafy tontolo tena mahaliana isika izay ahafahantsika mianika na aiza na aiza, mandray na inona na inona ary mifanerasera amin'ny ankamaroan'ny zava-drehetra tsy misy fetra amin'io lafiny io ary koa amin'ny fifehezana ny toetra. Mandritra ny andro vitsivitsy dia manampy fihenam-bidy 30% ny lalao, izay ho vidiny mahazatra, koa aza misalasala mijanona eo amin'ny fivarotana fampiharana Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Human Fall Flat, tonga ao amin'ny Mac App Store miaraka amin'ny fihenam-bidy